China mwenje girini GN101 / Vridis GN108 fekitori uye vagadziri | Baizan
yakajeka green GN101 / Vridis GN108
Yakavambwa mu1999, kuburikidza nekureba makore ekuvandudza, Baizan yakaumba yakasarudzika tsika yemakambani inosanganisira yakasimba manejimendi manejimendi system, inopfuurira kupayona, mukurumbira unogara, kugutsikana kwevatengi, uye kuhwina-kuhwina mutemo. Zvichakadaro, isu tine hanya kwechokwadi nezve kuvandudzwa kwehupfumi hwenyika. Kwemakore apfuura, kambani yedu inokura kwazvo uye inonakidzwa nemukurumbira wakanaka pakati pevatengi vedu muRabha uye mapurasitiki, mushonga uye indasitiri yesimba zviwanikwa. Parizvino, kambani yedu ine matatu ekugadzira mabheseni muShanghai, Zhejiang, uye Chongqing nenyika zvachose ma666 maeka uye vashandi mazana mashanu, 15% acho inyanzvi nyanzvi dzevashandi. Baizan inoomerera kunheyo yemusika yakanangana uye vatengi vane hushamwari. Isu zano redu nderekugara tichipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mitengo inonzwisisika uye sevhisi yakanaka usati uye mushure mekutengesa.
● External Package: Kusanganisira yemapuranga kesi pasuru uye cylindrical bhokisi pasuru.
a) Nyaya yematanda --- Yakagadzirwa neyemahara fumigation yemapuranga zvinhu, zvakadhindwa "Baizan Logo", "PVB Interlayer Firimu", "State centre yekutarisa uye kuyedza kwemakemikari zvinodiwa" uye "yakadzama Saizi, zuva rekugadzira uye Roll nhamba". Pasi pePallet yeForklift yakagadzirwa isina huni yemapuranga kana yemahara fumigation yematanda.
b) Cylindrical Bhokisi-- Rakagadzirwa nepepa, yemahara fumigation yemapuranga chifukidzo uye simbi denderedzwa. Yakadhindwa iyo "Baizan logo", "PVB Interlayer Firimu", "Yakadzama saizi, Yekugadzira Zuva uye Roll Nhamba", yega yega yakaparadzaniswa pallet yemapuranga inogona kutakura makatoni mana.
● Yemukati Pasuru: PVB firimu yaive yakapindirana uye izere yakafukidzwa nePE interleaving. Iyo roll yakapepetwa neAluminium foil bhegi. Chitupa tag chakanamatira kunze kweabhegi yealuminium.
Pashure: Chiedza brown brown T101 / Brown T108 / Brown T103
Zvadaro: Translucent chena M104 / Milky chena M102 / Opaque chena M101
Bhuruu pane yakajeka C101
yakajeka mota pvb
Rima bhuruu pane yakajeka bhuruu BD102